➡️ 11- Inona indray kosa ny zava-miseho raha toa ka mipoitra indray ilay olona na voaporofo ny fahitana azy taorian’ny didy manambara fa ny tsy fahitana azy?
Mitsahatra tanteraka ny fanatantarehana ilay didy izay nivoaka ary averina aminy avokoa ireo fananany araka izay azo atao ka izay ahitana an’ireo fananana amin’ny andro isehoany no andraisany azy.
Raha toa ka efa namidin’ilay nandray azy kosa ny fananany dia izay vidin’izany sisa no averina aminy.
Raha toa kosa ka natolotra ho an’olon-kafa ilay izy dia izay tombotsoa raisin’ilay nanolotra noho io fanolorana io no raisiny.
Raha toa indray ka efa nanambady olon-kafa ny vadiny dia afaka mangataka ny handravana izany fanambadiana izany miaraka amin’ny porofon’ny fahavelomany izy na izay olona nomeny fahefana.
➡️ 12- Ahoana indray raha toa ka voamarina fa maty ilay olona nambara fa tsy hita teo ?
Lasa misokatra ny fandovana azy izany hoe lasa mifindra tanteraka amin’ireo mpandova azy ireo fananany fa tsy fihazonana sy fampiasana tanteraka intsony ny zo an’izy ireo.
Raha mbola tsy ampy taona ny zanak’ ilay olona heverina tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao dia ny vadiny irery no mampiasa ny zo maha-ray na maha-reny azy (autorité parentale) amin’ireo zaza.
Tsy manan-kery ny fivarotana na fanolorana fananan’olona iray raha toa nisy ny fitaka sy haratsiam-panahy mba hilazana fa tsy hita ilay olona.
🔷 – II – NY OLONA TSY HITA POPOKA na « PORTE DISPARU » ?
➡️ 1 – Rehefa inona no lazaina fa tsy hita popoka na « porté disparu » ny olona iray ?
Lazaina fa tsy hita popoka ny olona iray raha toa ka tao anaty trangan-javatra sarotra na loza mety nanala ny ainy no tsy nahitana azy kanefa tsy hita ny fatiny.
Ohatra : ireo mpandeha tamin’ny sambo Gasikara tamin’ny taona 1991 izay lazaina fa sendra rivo-doza ka dia nilentika ny sambo ary tsy hita mihintsy ny vata mangatsiakan’ireo olona ireo hatramin’izao.
➡️ 2 – Paik’ady arahina ara-pitsarana :
Mampiditra taratasy fangatahana eny anivon’ny Fitsarana ireo rehetra manana tombontsoa amin’izany mba hanambarana ara-pitsarana fa maty ilay olona tsy hita popoka na « déclaration judiciaire de décès ».
Io didy io rehefa lasa didy raikitra na « grosse » no entina any amin’ny Kaominina misy ny toeram-ponenana faran’ilay olona tsy hita popoka mba ho adika anaty rejisitra.
Mandra-pahavitan’izany fandikana izany anefa dia mihatra avokoa ny fepetra voalaza rehetra teo aloha mikasika ny fitantanana sy fikarakarana vonjimaika ny fananan’ilay olona tsy hita popoka.
Raha nisy trangan-javatra sarotra niseho teo amin’ny Firenena toy ny fanafihan’ny tafika avy any ivelany ohatra na ny fikorontanana goavana miseho eto an-toerana ka nisy ny fanambarana ny hamehana manerana ny tanin’ny Repoblika na « état de nécessité nationale » dia enim-bolana aorian’ny fitsaharan’izany vao afaka mamoaka didy ny Fitsarana.
Hofaranantsika amin’ny heriny anio ny mikasika ity lohahevitra ity. Na dia somary lavalava ihany aza izay famelabelarana nentina tamintsika izay dia tombony be ho antsika ny nahalalana ny mikasika ny « absence » sy ny « porté disparu ».
🔷 III- INONA IZANY NO MAMPITOVY SY MAHASAMIHAFA NY OLONA TSY HITA EO AMIN’NY TOERAM-PONENANY INTSONY NO SADY TSY NANDRENESAM-BAOVAO (absent) SY NY OLONA TSY HITA POPOKA (porté disparu) ?
👉 Ny mampitovy ny olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao sy ny olona tsy hita popoka dia samy tsy hita daholo ireo olona ireo.
👉 Ny mahasamihafa azy fotsiny dia ilay tranga voalohany dia mametraka ahiahy ny amin’ny fahaveloman’ilay olona noho ny tsy ahitana azy eo amin’ny toeram-ponenany sy ny tsy fahazoana vaoavao avy aminy.
Ilay tranga faharoa kosa indray dia misintona ny saina hieritreritra avy hatrany fa maty ilay olona noho ireo trangan-javatra sarotra na loza nisy na tsy hita aza ny fatiny.
👉Manentana an’ireo izay manana fianakaviana tsy hita, mety hoe tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na koa tsy hita popoka ihany koa mba hijery izay voalazan’ny lalàna mahakasika ireo trangan-javatra ireo fa tsy tonga dia hizara na hivarotra ny fananan’ilay olona na handray fanapahan-kevitra hafa avy hatrany ka mety hanahirana ao aoriana.
⭕ Lohahevitra vaovao indray no hozaraina amintsika manomboka amin’ny herinandro.
← FITSIDIANA ARA-POMBA FANAJANA.
Fitsarana manetriketrika. →